Indlu encinane eRowienkach
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAndrzej Burtan
Woodhouse.Ukusinda okwenyani. Embindini wehlathi, kwindawo ecocekileyo efana nentliziyo, senze indawo apho unokuziva uyinxalenye yendalo. Ikhabhathi yelog apho ungaphumla kubomi bemihla ngemihla. Izakhiwo ezikufutshane zimalunga ne-2.5 km kude. Ukuba uyathanda ukusinda, imiceli mngeni kunye nokufika, le yindawo yakho. Ukuhlala apha kuya kukunika amava amangalisayo. Ukusondela kwendalo, izandi zehlathi, iimbono kunye nevumba kunye nokulula kobomi, ukuhamba, ikofu yasekuseni kwi-terrace kunye ne-bonfire yangokuhlwa zincedo zale ndawo.
I-chalet yeyabantu abayi-6, indawo engezantsi yindawo evulekileyo, kukho ikona enesofa kunye neencwadi ezininzi, kukho indawo yomlilo yamatye kunye nezihlalo zengalo, kukho itafile enkulu kunye nekhitshi enesitovu somlilo. Kukho negumbi lokuhlambela elisezantsi elinendlu yangasese kunye nebhafu. Kukho i-mezzanine evulekileyo kwigumbi eliphezulu elineebhedi ezintathu eziphindwe kabini. Enye ibhedi, esiyibiza ngokuba yibhere, inomandlalo kunye nebhedi yegusha. Umtsalane owongezelelweyo yithanga laseRashiya kunye nombhobho obandayo. Iindwendwe kufuneka zikhonze ngokwazo, kodwa siya kuzalisa ngamanzi, sincede ukukhanyisa isitofu kwaye sikubonise ukuba yintoni kwaye njani. Ukutshaya kuthatha malunga neeyure ezi-6 ukuze amanzi agqibelele. Iindleko yi-250 PLN yokuhlala yonke. Nceda usazise kwangaphambili ukuba ungathanda ukusebenzisa.
I-cottage ibekwe kufuphi ne-Zembolowa Góra, ungaya naseLuboń Wielki, Szczebel okanye eTurbacz.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrzej Burtan
Ukufika kwi-cottage ufuna imoto engaphandle kwendlela, ukuba awunayo, unokuthembela kuncedo lomninimzi oya kukuthatha kunye nomthwalo wakho kwindawo, kwaye imoto yakho iya kushiywa kwindawo yokupaka. elalini.
UAndrzej Burtan yi-Superhost